पहिरनका कारण ट्रोल बनेपछि झनै उत्साहित वर्षा - VOICE OF NEPAL
पहिरनका कारण ट्रोल बनेपछि झनै उत्साहित वर्षा
२७ बैशाख २०७६, शुक्रबार १०:१५ 281 ??? ???????
नायिका वर्षा सिवाकोटीको अहिले ट्रोल बनिरहेको छ । ‘विर विक्रम २’मा काम गर्नु अगाडिसम्म वर्षाको बजारमा, सामाजिक संजालमा खासै चर्चा हुन्थेन । तर, यसपटक उनको शैली परिवर्तन भएपछि उनी छाएकी छिन् । चलचित्रले कस्तो व्यापार गर्ला, वर्षाको अभिनयले कस्तो तारिफ पाउला त्यो त चलचित्र रिलिज भएपछिको कुरा भयो । तर, वर्षा अहिले चर्चामा आउने शैली अपनाइरहेकी छिन् ।
अहिले वर्षाको पहिरन हेर्दा एकदमै भिन्न खालका छन् । उनी, पहिरनकै कारणबाट पनि चर्चा होस् भन्ने वुझाइमा छन् । उनको पहिरनलाई लिएर थुप्रै खालका ट्रोल बनेपनि उनले त्यस्तै पहिरन लगाउन भने छाडेकी छैनन् । कतिपय अवस्थामा कलाकार ट्रोल बन्दा डराउँछन् । तर, वर्षा भने ट्रोलका कारण उत्साहित बन्न थालेकी छिन् ।
अभिनय, चलचित्रको व्यापार आदिका कारण पनि कलाकार चर्चा पाउँछन् । तर, चर्चामा आउनका लागि वर्षाले अपनपाएको यो नीति पनि अरुले सिको गर्ने खालको छ । जेठको ३ गतेबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘विर विक्रम २’बाट चलचित्र क्षेत्रमा उदाउने सोच वर्षाको छ ।